Muxuu Yahay Farqiga U dhexeeya Linux iyo Windows? (Akhriso+Dhagayso) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Muxuu Yahay Farqiga U dhexeeya Linux iyo Windows? (Akhriso+Dhagayso)
On Oct 17, 2020 294 0
Linux, waa Operating system oo loo soo gaabiyo OS, kaas oo lagu kicyo Computerada noocyadooda kala duwan, waxaana uu Computerka ugu dhiganyahay sida Windows oo kale, taas oo micnaheedu yahay inaan la’aantooda aanu waxtar lahayn Computerka, oo uu yahay keliya Hardware ama qalab aan shaqeyn Karin.
90% dadka isticmaala Computerada, waxay adeegsadaan nidaamka kicinta ee loo yaqaano Windows noocyadiisa kala duwan, hase yeeshe waxaa jira nidaam aan ahayn Windows oo laga heli karo inbadan oo kamid ah waxyaabihii aad ku heli jirtay windows, kaas oo loo yaqaano Linux.
Waxyaabaha uu kaga soocanyahay Linux-ka windows, dadkuna ku amaanaan waa isagoo ah Masdar ama il furan, taas oo loola jeedo inaad awood u leedahay in Linux-ka aad adeegsaneyso aad wax ka bedeli karto, haddii aad aqoon u leedahay mid kamid ah luuqadaha Programminta.
Windowska waxaad adeegsaneysaa oo lagu siinayaa copy-ga ama shaashada hore ee OS-Ka, mana jirto wax aad ka bedeli karto, basle Linux waxaad heystaa OS-ka oo rasmi ah, taasoo kuu sahleya inaad si fudud wax uga bedesho, waxna aad ugu darto.
Wuxuu kaloo Linux-ku leeyahay qaab dhismeed qurux badan oo adag, umana sahlana qof weliba inuu ku falaado, waxaana marka aad adeegsaneyso gebi ahaanba aad iska illoobeysaa waxa loo yaqaano Virus, taas oo ka dhigan inaadan u baahaneyn Anti Virus-yada Windowska lagula tacaalo.
Shirkadaha ugu waaweyn ee caalamka, waxay servaradooda shaqada u adeegsadaan Linux-ka, waxaana shirkadahaas kamid ah Facebook, Twitter iyo xitaa Google-ka.
Waxyaabaha xusida mudan waxaa kamid ah in Linux aanu ahayn keliya nidaam kiciya computerka, o oleh shaashad madow, mana lahan qeybo xadidan, sidaba Windowsku u leeyahay noocyo cayiman sida Window 7 ama Window 10, balse Linux wuxuu leeyahay boqollaal nooc oo kala duwan, qofka caadiga ah ayaana awood u leh inuu sameysto nooc isaga u gaar ah, hadiiba uu aqoon u leeyahay luuqadaha Borograaminta.
Marka laga soot ago dhinaca Virus la’aanta ee lagu amaano Linux-ka, waxay kaloo dadka adeegsada ku amaanaan inuu yahay nidaam ku wanaagsan xagga xawaaraha, waxaana hadii computerkaagu leeyahay muwaasafaat wanaagsan aad iska illoobi doontaa computer soo daaha, oo awaamiir qaadashadiisu adagtahay.
Waxaa kaloo intaa u dheer in Linux uu yahay mid lacag la’aan ah, halka Windows-ka nuskhadiisa rasmiga ah ay u baahantahay inaad soo iibsato ama aad adeegsato kuwa lasoo jebiyay, waxaad Linux kala degi karta website-yada rasmiga ah ee uu leeyahay, adigoo aanan bixin wax lacag ah.
Shirkadda Windowska, marka ay kaa gado nuskho kamid ah OS-keeda, waxaa lagu siinayaa oo keliya rukhsad kuu ogolaaneysa inaad adeegsato, balse Linux wuxuu leeyahay xurriyad furan, intaba aad ilaaliso xeerarka guud ee nidaamka.
Softwaredad kale ee lagu isticmaalo Linux-ka kaagama baahna inaad dhibaato badan ka marto marka aad adeegsaneyso, waxaad si fudud uga shuban kartaa bakhaaro ku dhex yaala Linux-ka, waxaa bil caksi ah windows-ka oo ay qasab tahay inaad soo degsato Software-ka, kadibna aad ku shubato.
Noocyada ugu caansan ee barnaamijyada Linux-ka waxaa kamidah Ubuntu, Linux mint, Fedora, Kali Linux, Elementor iyo kuwa kale oo aan tiro lahayn.
Farqiyada ugu weyn ee u dhexeeya Linux iyo Windows waxaa kamid ah in windowsku ay leedahay shirkadda Microsoft, wax weliba oo laga bedelana waxay ka imaanayaan dhinaca shirkadaas, balse Linux waa nidaam furan oo ay mar weliba hormariyaan shakhsiyaad kala duwan, sidaas darteed illaa maa xad waxaa dhici karta in xogaha kugu keydsan Computerka ay kuu ilaashamaan.
Linux-ku kuma shaqeeyaan softwareda Windowska loogu talagalay, tusaale Microsoft Word oo ah barnaamij loo adegsado qoraallada uguma tageysid Linux, taas bedelkeeda waxaad ka heleysaa barnaamij lagu magacaabo Liberoffice.
Waxaase jira barnaamijyo aan laga helin Linux, kuwaas oo si fudud aad ugu isticmaasho windowska, haddii aad u baahato softwarredaas oo kale, waxaad awoodaa inaad ku subato Linux-ka, adigoo soo maraya barnaamij lagu magacaabo Wine, oo awood ku siinaya inaad Linuxka ku dhex isticmasho barnaamijyadii windowska, hase ahaate wuxuu wataa culeesyo badan oo xaga xawaaraha Computerka ah.
Haddii ay tahay markaagi ugu horeysay ee aad isticmaaleyso Linux, waxay khubarada Technolgoiyada ee ku takhasusay barnaamijyadan kuusoo jeedinayaan inaad ka billowdo nooca Linux mint, kaas oo sahlan marka loo eego si guud Linux, waxaana ku jira barnaamijyo badan oo aad ka heli jirtay Windowska.
Waxaad u baahantahay oo keliya inad gasho webka rasmiga ah ee Linux mint, kadibna aad soo degsato File-ka oo ISO ah, adigoo markaa kadib u baahan inaad internetka kala soo degto barnaamijyada kuu fududeynaya inaad ISO-ga ku gubto flashka.
Haddii ay kugu adkaato arintaas, waxaad Internetka kala degi kartaa buugaag ku qoran luuqadaha Carabiga iyo Englishka kuwaas oo sharxaya barnaamijyada Linux, waxaana ka fudud muuqaallada duuban ee ku jira barta Youtube-ka.
Dadka adeegsada Internetka, ee hadana dareemaya halisyada amni, sida dadka taageersan halganka ay Muslimiintu kula jiraan wadamada reer galbeedka ayaa sheega in marka ay internet ka isticmaalayaan computer ay flash ku gubtaan barnaamijka Linux, iyagoo markaa kadib si kumeel gaar ah u isticmaalo oo aaney computerka ku Shubin, marka ay halis dareemaanna waxay keliya sameeyaan in flash-ka ay ka saaraan computerka, markaas oo ay adagtahay in sirdoonnadu ogaadaan waxaad isticmaaleysay.
Inkastoo Linux uu wax badan dhaamo Windows, marka loo eego dhinacyada VIruska iyo culeeska computerka, hadana waxay khubaradu amnigu sheegayaan in Linux uu yahay aalad aan la isku halleyn Karin 100%, maadaama uu yahay Masdar furan oo ay dhici karto in sirdoonnadu ay kusoo daraan barnaamijyo ay ku daba galaan dadka isticmaala.
Waxaa intaa dheer in aas-aasaha rasmiga ah ee barnamijkan la sheegay inuu ogolaaday inuu si hufan oo toos ah ula shaqeeyo sirdoonnada CIA-da Maraykanka, taasi oo iyadana muujineysa halista uu xambaarsanaan karo barnaamijkan, haddii qofku isla heysiiyo.
In badan oo kamid ah dadka Hackers loo yaqaano ee u dhaca xogaha dadkana waxay isticmaalaan oo ay ka duulaan barnamijyada Linux, taasina waa mid kamid ah nuqaad dacfiga uu leeyahay Linux.
Inkastoo ay sidaas tahay, hadana haddii ay Linux iyo Window kulmaan, iyadoo laga eegayo dhibaatada Virus-yada, waxaa la qaadan karaa Linux, maadaama aanu aqoonba wax la yiraahdo Virus, Database-kiisana aan lagu sameyn.
Maadaama uu lacag la’aan yahay, internetkana aad si bilaash ah uga soo degsan karto, hadana waxaa xaqiiq ah inaaney jirin caalamkan wax bilaash la isku siiyo, sidaas darteed softwareka aad lacag la’aan ku hesho, waxaad ogataa inaad adigu tahay lacagta.
Waxaa la mid ah baraha bulshada ee Internetka, kuwaas oo si lacag la’aan ah lagu isticmaalo, laakiin dadka aqoonta u leh arimahan waxay sheegayaan in dadka lacagta laga sameynayo ay yihiin dadka isticmaalaya.
Tusaale ahaan Facebook-ka, waxay heshiis ku kacaya balaayiin dollar la geleysa mid kamid ah warshadaha caalamka, iyagoo ku heshiinaya in dadka loo xayaysiisyo, welibo iyagoo aan dareemeyn mid kamid waxyaabaha ay soo saarto shirkadaas, taasina waxay shirkadda usoo jiideysaa macaamiil badan, halka Facebook ay balaayiin dollar qaadaneyso.
Waxaa intaa dheer, in barahan bulshada ee lacag la’aanta ah ay buun buuniyaan afkaar burburineysa diinta iyo dhaqanka muslimiinta, sida in falalka anshax darrada ee Liwaadka lagu tilmaamo xurriyad shakhsi iyo waxyaabo lamid ah.
Fikradan oo kale ayay Facebook waxay ku farraqeysaa dadka isticmaala aaladeeda, sida ay ugu cel celineyso ayayna maalinka dambe saameyn ku yeeleyneysaa maskaxda iyo fakarka malaayiin ruux oo muslimiin ah, inaad bedesho qanaaacada 1% guud ahaan dadka caalamka ayaana ka dhigan howl adag oo ay suurageliyeen barahan bulshada ee noqday Aafo ay la noolyihiin Muslimiinta.
Halkan ka dhagyaso Maxay kala yihiin Windows iyo Linux?